Achawlaymyar - Page2of 1136 - News and Media
January 17, 2022 by Achawlaymyar
အဂၤါေန႔တြင္ ကမာၻႏွင့္အနီးဆုံးဥကၠာခဲျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရမည္ လာမယ့္အဂၤါေန႔ January 18 ရက္ေန႔ရဲ႕5PM ဝန္းက်င္ေလာက္မွာ ေပေပါင္း 3400 ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ မိုင္တစ္ဝက္ခန္႔အက်ယ္ရွိကာ Empire State Building ႀကီးရဲ႕သုံးဆေလာက္အျမင့္ရွိတဲ့ဥကၠာခဲတစ္ခုဟာကမာၻနဲ႔အနီးကပ္ဆုံးျဖတ္သန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥကၠာခဲကို 1994 August9ရက္ေန႔မွာ Australia ကနကၡတ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Robert McNaught ကရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး (7482) 1994 PC1 လို႔နာမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥကၠာခဲဟာ 1993 January 17 တုန္းကလည္းနီးနီးေလးျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး 2105 January 18 မွာလဲအလားတူျဖတ္သန္းသြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္အခု 2022 January 18 မွာေတာ့တကယ္ကိုအနီးကပ္ဆုံးစံခ်ိန္နဲ႔ျဖတ္သန္းသြားမွာျဖစ္ၿပီးေနာင္ႏွစ္ေပါင္း 200 ေလာက္အထိဒီေလာက္နီးလာႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ကမာၻ႔အနီးကေနျဖတ္သန္းသြားတဲ့အခါမွာ တစ္စကၠန္႔ကို 12 မိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေ႐ြ႕လ်ားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻကိုဝင္တိုက္မိမွာကိုေတာ့သိပ္ၿပီးမစိုးရိမ္ၾကပါနဲ႔။ ဥကၠာခဲဟာကမာၻနဲ႔မိုင္ေပါင္း Million နဲ႔ခ်ီတဲ့အကြာအေဝးကေနျဖတ္သန္းသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ကမာၻကိုဝင္တိုက္ဖို႔ဆိုတာအလြန္နည္းတဲ့အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း … Read more
အာမခံကောင်းလို့ဆိုက်လျော်လိုက်ရတဲ့သိန်း(၂၀၀၀)ကျော်ကို ပြန်လာပေးအောင်ဆုတောင်းပေးကြဖို့အကူအညီတောင်းလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း
အာမခံကောင်းလို့ဆိုက်လျော်လိုက်ရတဲ့သိန်း(၂၀၀၀)ကျော်ကို ပြန်လာပေးအောင်ဆုတောင်းပေးကြဖို့အကူအညီတောင်းလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း မဂ်လာပါချစ် ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် သိင်္ဂိထွန်းကတော့ သူမ ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်း ခံပြီး ရှာဖွေ ထားတဲ့ ငွေကြေး များကို အရမ်း တန်ဖိုးထားသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒီလိုတန်ဖိုးထားပေ မယ့်လည်း မိတ်ဆွေ တစ်ဦးအား အာမခံ ပြီး ငွေချေးပေးခဲ့ တာကြောင့် သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် စိုက်လျော် ပေးခဲ့ရပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ အကြောင်းရာလေးကိုမကြာသေးခင်က သိင်္ဂီထွန်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပို့စ်တစ်ခု တင် ထားတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။အဲ့ဒါကတော့ သူမထံမှ သိန်း(၂၀၀၀)ကျော် လိမ်ပြီး ရှောင်ပြေးနေသူအား တိကျ ပြတ်သား လွန်းတဲ့ စကား တစ်ခွန်းဖြင့်စိန်ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ် ပါ … Read more
“တောထဲ တောင်ထဲမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးမရှိဘူးဆိုရင် ငှက်ပျောပင်ကို သတိရပါ”
ထိခိုက် ဒဏ်ရာများအတွက် အနာကျက်တဲ့ ငှက်ပျောစေး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ငုတ်ထိုး ခြေချော် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရကာ သွေးထွက်သံယို အနာတရ ဖြစ်တတ်ကြသည်က လူတိုင်းသဘာဝပင် ဖြစ်ပါ၏။ အချို့သောဒဏ်ရာ အနာတရ ဖြစ်ပါလျှင် ရုတ်တရက် ဘာလုပ်ရမည်မသိ အခက်တွေ့တတ်ကြပါ၏။ ဆေးလည်းမသိ ဆေးလည်းမရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းတို့ဖြင့် ဝေးကွာပါလျှင် ငှက်ပျောပင်ကို သတိရကြပါ။ ငှက်ပျောပင်ကို ခုတ်လိုက်ပါ အစေးများ ထွက်လာပါမည်။ ထိုအစေးဖြင့် ဒဏ်ရာကို သုတ်လိမ်းပြီး အဝတ်စည်း ထားလိုက်ပါ။ သွေးတိတ်သွားပါမည်။ ၂ ရက် ၃ ရက်ကြာလျင် အနာကို ဖြေကြည့်လိုက်ပါ။ အံ့ဖွယ် အနာကျက်ပြီး ဒဏ်ရာ ပျောက်ကင်းနေမည်ကို တွေ့ရပါမည်။ အမှတ်မထင် ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ပါမူ ငှက်ပျောပင်ကို သတိရကြပါစို့။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းအမှတ်၃၆၄ အနာကျက်တဲ့ငှက်ပျောစေး ========== Zawgyi … Read more
PDFမြင်တာနဲ့ လက်၃ချောင်းထောင်ကာအားကိုးတကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့က‌လေး‌တွေရဲ့အသံကိုကြားတော့ မျက်ရည်ကျမိပါတယ်(ရုပ်/သံ)
PDFမြင်တာနဲ့ လက်၃ချောင်းထောင်ကာအားကိုးတကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့က‌လေး‌တွေရဲ့အသံကိုကြားတော့ မျက်ရည်ကျမိပါတယ်(ရုပ်/သံ)PDFမြင်တာနဲ့ လက်၃ချောင်းထောင်ကာအားကိုးတကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့အသံကိုကြားတော့ မျက်ရည်ကျမိပါတယ် အောက်ဆုံးတွင်videoပါသည်စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ မောင်လေးငယ်များPDFယူနီဖောင်း ကိုမြင်တာနဲ့ “လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီး အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ် အောင်ကိုအောင်ရမည်”တဲ့သူတို့လေးတွေ အားကိုးတကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့အသံကိုကြားမိတော့မျက်ရည်ကျမိပါတယ် fighting ပါညီငယ်နှမငယ်လေးတို့ရယ် ကိုကိုမမတို့က အများကြီးမစွမ်းပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အာဏာရှင်ကိုအမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းပေးသွားမှာပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည် Credit Zawgyi PDF္မင္တာနဲ့ လက်၃ခေ်ာင်းထောင္ကာအားကိုးတကြီးနဲ့အ္လောိုက္တဲ့က‌လေး‌တြေရဲ့အသံကိုကြားတော့ မ္က်ရည္က္မိပါတယ်(ရုပ်/သံ)PDF္မင္တာနဲ့ လက်၃ခေ်ာင်းထောင္ကာအားကိုးတကြီးနဲ့အ္လောိုက္တဲ့အသံကိုကြားတော့ မ္က်ရည္က္မိပါတယ် အောက္ဆုံးတြင်videoပါသည္စစ်ေ်ရာင္စခန်းတစ္ခု်မာရြိတဲ့ မောင်လေးငယ္မ်ားPDFယူနီဖောင်း ကို္မင္တာနဲ့ “လက်သုံးခေ်ာင်းထောင်ပြီး အေရးတ္ပောုံအောင်ရမယ် အောင္ကိုအောင်ရမည်”တဲ့သူတို့လေးတြေ အားကိုးတကြီးနဲ့အ္လောိုက္တဲ့အသံကိုကြားမိတော့မ္က်ရည္က္မိပါတယ်fighting ပါညီငယ်န်မငယ်လေးတို့ရယ် ကိုကိုမမတို့က အမ်ားကြီးမ္စမ်းပေမဲ့ တတ္နိုငေ်သလာက် အာဏာ်ရင္ကိုအ္မစ်္ဖတ်ခ္မေှုန်းပေးသြာ်းမာပါအေရးတ္ပောုံအောင်ရမည် Credit PDFမြင်တာနဲ့ လက်၃ချောင်းထောင်ကာအားကိုးတကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့က‌လေး‌တွေရဲ့အသံကိုကြားတော့ မျက်ရည်ကျမိပါတယ်(ရုပ်/သံ)PDFမြင်တာနဲ့ လက်၃ချောင်းထောင်ကာအားကိုးတကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့အသံကိုကြားတော့ မျက်ရည်ကျမိပါတယ် အောက်ဆုံးတွင်videoပါသည်စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ မောင်လေးငယ်များPDFယူနီဖောင်း ကိုမြင်တာနဲ့ “လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီး အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ် အောင်ကိုအောင်ရမည်”တဲ့သူတို့လေးတွေ အားကိုးတကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့အသံကိုကြားမိတော့မျက်ရည်ကျမိပါတယ် fighting ပါညီငယ်နှမငယ်လေးတို့ရယ် ကိုကိုမမတို့က အများကြီးမစွမ်းပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက် … Read more
မိဘများဟာ ၎င်းတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပြီး သားသမီးများဘဝ၌အကောင်းဆုံးများသာရရှိစေရန် အနစ်နာခံရန်ပင် ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဘဲ သားသမီးအတော်များများဟာ ၎င်းတို့မိဘတွေရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့အနစ်နာခံမှုတွေကို အလားတူပြန်မပေးဆပ်တတ်ကြပါဘူး။ Guatemala နိုင်ငံ San Juan Cotzal မြို့မှအသက် ၇၅ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သားဖြစ်သူရဲ့စွန့်ပယ်ခြင်းခံရပြီးနောက် သူမဟာလမ်းများပေါ်၌ နေထိုင်ဖို့အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Catarina Raymundo အမည်ရှိအဆိုပါမိခင်အိုဟာ ယခုလိုဘဝမျိုးမကြုံခဲ့ရတဲ့ ယခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက သူမမှာ အိမ်လိုခေါ်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သို့သော် သူမ၏သားဖြစ်သူက နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် စာရင်းကိုင်ပညာသင်ယူရန်နှင့်သူ၏လေ့လာမှုအတွက်ငွေလိုအပ်လာတဲ့အခါ Catarina ဟာ သူမ၏အိမ်ကိုပေါင်နှံရန်အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး သားဖြစ်သူ၏လေ့လာမှုများအတွက် သူမပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုပင် ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ သားဖြစ်သူအတွက် အမေရိကန်တွင်ပညာဆည်းပူးပြီးနောက် Guatemala သို့ပြန်လာရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အရာအားလုံးကိုပြီးပြည်စုံအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာဖြင့် သူမဟာ သားဖြစ်သူ အမေရိကန်ရောက်သွားပြီးကတည်းကပင် သားထံမှဘာသတင်းစကားမှမကြားခဲ့ရပါဘူး။ ထို့နောက် Catarina … Read more
(၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာမည့္ေဒသမ်ား
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် တိမ်အနည်းငယ် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား၊ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ လှိုင်းအနည်းငယ်မှ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၄)ပေမှ (၆)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် နေရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ … Read more
သင်အိပ်နေတဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကို သတိထားပါ….ဒီညပဲ မအိပ်ခင် အပေါ်ဖုံးကို ချွတ်ကြည့်ကြပါ…
သင်အိပ်နေတဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကို သတိထားပါ….ဒီညပဲ မအိပ်ခင် အပေါ်ဖုံးကို ချွတ်ကြည့်ကြပါ… အသက်(36)နှစ် အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Stewart Arms ဟာ ကိုယ်လက်မအီမသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေး သမား ဖြစ်တာကြောင့် ခရီးပန်းတာပဲလို့ ယူဆပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆနေခဲ့ပေမယ့် နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ ဒဏ်ရာက မသက်သာလို့ သူ့မှာ အဖျားရောဂါရှိနေပြီထင်ကာ ဆေးခန်းကို သွားပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာရဲ့ စစ်ဆေးမှု မှာလည်း တစ်ခြားထူးခြားမှုကို မတွေ့ရလို့ အဖျားကျဆေးကို ပေးပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သွေးအဖြေကလည်း ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်အကြာမှာပဲ Stewart ဟာ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာ သွေးခဲတွေ ပါလာတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့ရောဂါကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ရပြီး ရောဂါရဲ့အဖြေကတော့ “အဆုတ်ကို မှိုစွဲ”တဲ့ ရောဂါ ဖြစ် တယ်လို့အဖြေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ … Read more
အသက္၁၀၄ႏွစ္ရွိၿပီး မလုပ္ႏိုင္မကိုင္ႏိုင္ျဖစ္သြားသည့္ မိခင္ျဖစ္သူကို အမႈိက္ေကာက္ရင္း ရွာေကြၽးေနေသာ အသက္၆၅ႏွစ္အ႐ြယ္ သားျဖစ္သူ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Shandongျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္၆၅ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖိုးအိုတစ္ဦးသည္ အ႐ြယ္ေကာင္းခ်ိန္ကပင္ အိမ္ေထာင္မျပဳခဲ့ပဲ ၾကင္ေဖာ္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္သာ အတူေနထိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဖိုးအိုဧ။္မိခင္ျဖစ္သူမွာ အသက္၁၀၄ႏွစ္အ႐ြယ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး မလုပ္ႏိုင္မကိုင္ႏိုင္ေတာ့ပဲ အိပ္ရာထဲ၌သာ လွဲအိပ္ေနရၿပီး တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္သူအဖိုးအိုမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ အဖိုးအိုသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မိခင္ျဖစ္သူကို အိမ္မွာတစ္ေယာက္တည္း ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္လမ္းမေပၚထြက္ကာ အမႈိက္ပုံေတြမွာ ျပန္ေရာင္းလို႔ရႏိုင္မည့္ ပစၥည္းအေဟာင္းေလးေတြႏွင့္ ဘူးခြံေလးေတြကို လိုက္ေကာက္ရင္း ဝင္ေငြရွာခဲ့သည္။ အဖိုးအိုသည္ ေန႔လည္ခင္း ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူမွ ဗိုက္ဆာေနမည္စိုး၍ အိမ္သို႔အမွီျပန္ကာ မိခင္အတြက္ ႏို႔ဘူးေလးအားျပန္ေႏြးကာ တိုက္ေကြၽးခဲ့ျခင္းျဖင့္ သူ႔ဘဝတြင္ မိခင္ျဖစ္သူရွိေနျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုအေျခအေနပဲေရာက္ေရာက္ အထီးမက်န္ရပဲ ေပ်ာ္႐ႊင္ရေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ Rain (For Ialinks) Unicode အသက်၁၀၄နှစ်ရှိပြီး မလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင်ဖြစ်သွားသည့် မိခင်ဖြစ်သူကို … Read more
နာမည်ကျော် လူသိများလှတဲ့ Beauty Blogger တစ်ယော က်လည်းြ ဖစ်သလို Social Influencer တစ်ယောက် လည်းဖြစ်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါ ဒါ ကတော့ နိုင်ငံရပ်ြ ခားမှာနေပြီး မြန်မာ့နွေ ဦးတော်လှန်ေ ရးအတွက် အတက်ကြွ ဆုံးပါဝင်လှုပ် ရှားနေ သူတစ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတယ်။ ပန်ကိတ်ဒါဒါက နွေဦးတော် လှန်ရေးရံပုံေ ငွတွေကို ရှာဖွေပေးနေ လျက်ရှိပြီး မြန်မာပြည် မှာရှိတဲ့ ပြည်သူ လူထုနဲ့အတူတူ တစ်သား တည်းရပ် တည်နေတာပဲဖြ စ်ပါတယ်။ တိုင်း တစ်ပါးနေမှာနေပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ် တဲ့အလှူငွေေ တွကောက်ခံပေးေ နတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါ ဒါဟာ ဒီကနေ့ မှာတော့ သူမရဲ့ပိုစ့်အော က်မှာမန့်တဲ့ ကောမန ့်တစ်ခုကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ ရကြောင်း … Read more
ပုဂံက အကြော်သည်လေးရဲ့ အတုယူဖွယ် ဈေးရောင်းနည်း ပညာ (သို့မဟုတ် ) စေတနာ ဈေးရောင်းနည်း….
ပုဂံက အကှောသွညလွေးရဲ့ အတုယူဖှယွ ဈေးရောငွးနညွး ပညာ (သို့မဟုတွ ) စတနော ဈေးရောငွးနညွး…. ပုဂံမှာ ပုဇှနကွှောလွေးစားလိုကရွရငွ အတောအွရသာရှိတယွ သှားသူတိုငွးပှောကှတယွ.. ဘုရားအောကမွှာ အဲ့အနတွီကှီး အကှောရွောငွးတယွ.. မှနမွာတှရေဲ့ ထုံးစံ သူ့ဘေးမှာ ပုံစံတူ အကှောရွောငွးသူတှေ တူညီတဲ့ စီးပှားပှိုငဘွကတွှေ အမှားကှီးပဲ.. သူက မတူကှဲပှားအောငွ လုပမွရဘူး.. ဒီ အကှောပွဲ ရောငွးစရာရှိတယွ.. ဒါနဲ့ သူဘာလုပလွဲဆိုတာ ကှှနတွောွ ကှညွ့တယွ Value Added Service ပေးတာပဲလုပလွို့ရတယဆွိုတာ သူနားလညတွယွ.. နံပါတွ တဈ လှကေားက ဆငွးလာသမှှ ဘုရားဖူးအကုနလွုံးရဲ့ ဖိနပတွှေ ကှညွ့ပေးတယွ.. စကားခှိုခှိုနဲ့ ရောငွးတယွ.. မှနမွာတှေ အားနာတယွ Attention ရတယွ.. နံပါတွ နှဈ တဈခှား … Read more
← Previous Page1 Page2 Page3 … Page1,136 Next →